के पत्रकारले अडियो ईडिट गरेकै हुन ? ईटहरीका मेयरको किन भयो हाइहाई ? - OneZero News
के पत्रकारले अडियो ईडिट गरेकै हुन ? ईटहरीका मेयरको किन भयो हाइहाई ?
इटहरी । केहीसाता यता ईटहरीको एउटा घटनाले देश तथा बिदेशमा समेत निक्कै चर्चा पाएको छ । त्यो हो मेयर द्धारिकलाल चौधरी र पत्रकार बिराट अनुपम बिचको फोनबार्ता । प्रायजसो त्यो फोन धेरैले सुनिसकेका छन तर फोन संवादको भित्री पाटो कमैलाई थाह हुन सक्छ । आज हामी सोही बिषयमा चर्चा गर्नु उपयुत्त ठान्छौँ ।
घटनाको चर्चा गर्नुअघि यो घटना कसरी शुरु भयो भन्ने बिषयको चुरो कुरो बुझनु जरुरी छ । धेरै कुरा मेयर चौधरीले बिभिन्न अन्तरबार्तामा भनिसकेका छन । उनको कुरालाई आधार मान्ने हो भने अनुपम लगायत केही पत्रकार र केही मिडियो उनी सँग शुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए । उनीहरुको माग पुरा गर्न नसक्दा केही भ्रष्टचारीहरु समेतको समुह बनाई उनीहरु हात नै धोएर लागेका थिए । उनले उल्लेख गरेका नाम यहाँ उल्लेख गर्नु उपर्युत छैन । किनकी मेयर साबले आफुलाई बायस गरे भन्दा कतै ब्यत्तिगत रुपमा उनीहरु पनि बायसमा परेका हुन की उनीहरुको जवाफ नआई यसै भन्न नसकिएला । एउटा मेयर भएपछि सबैको उनीमाथी नजर र निगरानी हुनु स्वभाविक पनि हो ।
दुई कार्यकाल हाँसपोसा गाबिसको अध्यक्ष समेत भएका चौधरीको बिगत कही कतै गलत काममा समाबेश भएको प्रायजसो भेटिँदैन । अन्जानमा कहिँ कतै भएको छ भने दैव जानुन् । उनले पत्रुकार र चाटुकार भनेका पत्रकार अनुपमले पनि कहिँ कतैबाट ब्यत्तिगत लाभ लिएको बिषय खासै भेटिएको छैन । भलै उनी स्वभावका हिसावले हक्की र छुच्चो भने पक्कै हुन । तर उनको पत्रकारितामा मेयरले आरोप लगाएजस्तो ठयाक्कै प्रमाणित हुने कुरा भने पाइँदैन । बिवाद कहाँबाट शुरु भयो भन्ने बिषयमा हालीले यसअघि पनि उल्लेख गरेका छौँ तसर्थ त्यतातिर नजाऔँ । पछिल्ला घटनाक्रमका बारेमा मात्र चर्चा गरौँ ।
केहीसाता यता कर्मचारीलाई कुटपिट,पत्रकारलाई दुब्र्यबहार र धम्की दिएको आरोप लागेका ईटहरीका मेयर चौधरीलाई बिराटनगर एअरपोर्टमा भब्य स्वागत गरिएकोे छ । शुक्रबार साँझ विराटनगर विमानस्थलमा ओर्लिदा उनलाई स्वागत गर्न इटहरीका युवाहरु पुगेका थिए । उनिहरुले मेयर चौधरीको भब्य स्वागत गरे । भ्रष्टाचार विरुद्दको अभियानमा हामी साथ छौं भन्ने आशयका ब्यानर सहित पुगेका युवाहरुले स्वागत गर्नुका साथै मेयरको जयजकार गरे ।
सहभागीहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मेयरको अडानको प्रसंसा गरेका थिए । युवाहरुले जथाभावी समाचार लेख्न पाइदैन भ्रष्ट कर्मचारी चाहिदैन भन्दै नारावाजीसमेत गरेका थिए । पत्रकारलाई कुट्ने धम्की दिएका मेयर चौधरीको आलोचना पत्रकारहरुबाट भैरहदा एउटा जमात भने उनको भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधिको पक्षमा देखिएको छ । केहीदिन यता सामाजिक सञ्जाल लगायत स्थानीयस्तरमा मेयरको पक्षमा जनमत देखिएको छ ।
पछिल्लो मेयरले उठाएको भ्रष्टचार बिरोधी अभियानमा भने प्रशस्त जनमत देखिएको छ । उनको प्रशंषा गर्नेको लर्को समेत देखिन्छ । उनको सो अभियानमा हाम्रो पनि साथ छ । तरपनि समाचारको बिषयमा पत्रकारलाई धम्की दिने र थर्काउने काम भने गलत हो र यसलाई हामी गलत नै भनिरहने छौँ । सामाजिक सञ्जालमा र बाहिरपनि मेयरको पक्षमा बनेको जनमत पत्रकारलाई थर्काएको बिषयमा होईन यो जनमत भ्रष्टचार र खराब आचरण भएका ब्यत्तिहरुका बिरुद्ध उनले उठाएको मुद्धाको बिषयको जनमत हो ।
तसर्थ मेयरले यो कुरा बुझनु जरुरी छ । भलै पत्रकार गलत रहेछन भनेपनि मेयर चौधरी ईटहरीका अभिभावक हुन । उनले आफना सन्तान झै सम्झेर,सम्झाएर एकपटक माफी दिनुपर्छ,केही हल्ला समेत चलेको छ पत्रकारले शुरुमा गाली गरेको तर सोही अडियो चाँहि हटाएर (ईडिट) सम्पादन गरी मेयरले गाली गरेको मात्र राखिएको छ भनेर यदि यो कुरा साँच्चो हो भने पत्रकारले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ । यदि मेयरले मात्र धम्की दिएका हुन भने उनले अलिकति पनि सानो मन नबनाई आत्मालोचना गर्नुपर्छ ।